#मेरो_मनको_देवकोटा_यहि_सहि_हो_मेरो_कुनै_दिनको_रानि – Hamronigrani
२९ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:५८ मा प्रकाशित
✍️लेखक कृष्ण रावल
कलमले बिचार रोप्यो ढुङ्गाको अक्षरमा। चन्दागिरिको भञ्ज्याङमा उभिएर यात्रि कबिता कोर्यो र सिर्जना को नबिन वाहार ल्याइदियो नेपाली को साहित्य इतिहासमा।
आँसु पसिना र अभावका निर्झरिणि बनेर बगेका छन् देवकोटा का रचनाहरू र ढकमक्क फुलेका छन् प्रतिभाका कुमिदिनिहरु। बादलमा बुट्टा भनेर सजाइदिन सिपालु थिन उनि । ल्हासाको सुन बेकार सुन बनाइदिए मदनको भौतिक सम्पत्तिले मात्रै सुखि हुन सकिदैन भन्ने सन्देश दिदै.……
#हातको_मैला_सुनको_थैला_के_गर्नु ? #धनले
सुनको भोक थिएन, न त भोगको सोख नै तर नुनको सोझो गर्न चुकेनन् देशको ,विणाको मङ्कारमा लठ्याइदिए युगलाई।कलम मा जादु थियो जुनसुकै बेला बगिदिन्थ्यो बेरोकटोक युक को प्रतिनिधि थिए। इतिहास का निर्माता थिए विचार का वहाक र स्वप्नद्रष्टा थिए।
चन्द र मङ्गललाइ भेट्न चाहे नौलाखे तारा टिपेर पोल्टाभरि सजाउने रहर साँचे । चन्द्रमासे मितेरी गाँसेर बस्ती बनाउन आतुर छ कबि मन । पुर्णेको साँझ बगैचातिर शितल तापेर पुर्वि क्षितिजमा निहाल्दा एकै चोटी हासिदिन्छन् चन्द्रमा र मङ्गल । अनि मलाइ ताजुब लाग्छ:
यो उद्गार एक सचेत स्वप्नद्रष्टाको हो। एक अग्रगामी चेतनाले मात्रै देख्न सक्छ अलिपरको कुरा। प्रकृति को गित गाउने धेरै थिए । सिर्जनाको खेलो गर्ने कम थिएनन् तर सिमा नाघेर अन्तरिक्षको उडान भर्ने उनि मात्रै थिइन् । अहिले समाजले उत्खनन गर्न थालेको छ उन्को र मेरो चौडा छाती बोकेर जन्मेछ तिर्थमाघव मेरो दिलको राजकुमारी। (नि.. )भनेर उनको नाम अपमान भयो । सरस्वती को बरदान थियो यथार्थमा सधैं सरस्वती नाचिन् उसको नजरमा समयको वायुपंखी चडेर उडान भर्ने उनले नै सिकाइन् राष्ट्रका लागि न्यौछावर गरिदियो आफ्नो प्रतिभा र उर्जाशिल क्षमतालाइ । ३दिन बितेको पत्तै भएन। पौरखि प्रतिभाले आफ्ना लागि केहि साँचेर , केहि राखेन । सडकमा पोखियो र आफुभित्र को सबै खन्याइदिइन् सबै मेरो सहयात्रीको सङ्घर्ष को झोलामा।
हात थाप्ने लाइ नाइ भनेन साहिला बाजेले । सधैं खोजि हुन्थ्यो कलम र कापिको । धनदौलत येश_आरामको खोजि गर्ने फुर्सद भएन । उदात्त उच्च बिचार हुनेहरुको मन रित्तो बिचार बिबेकको धनि थियो तिर्थे त्यसैले भन्छ :
श्रमको संसारमा रम्नेलाइ धनको लालच हुदैन। तिर्थे कहिले दुखि भएन। कसैसित गुनासो गरेन साहित्य साधनको आफ्नै संसार बनायो। आफ्नै संसारमा रमायो। पागलहरुको बस्ती बसाउन खोज्यो एउटा पागलले। पागल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्यो सगरमाथा को चुचुरो मा । लाखौं पागल उत्पादन भैसके त्यहाँ बाट। कति नक्कली पागल हरु बिदेश तिर पलायन भए तेस्को पागल बनाउने डिजाइनर म थिए। सक्कली पागलको खोजिमा टोलाइरहेछ उदासीन अनुहार लगाएर।।
हिसाब किताब आफ्नै छ । उसको गणित मा एक बाट एक घटाउँदा एक बाँकि रहन्छ । न्युटनको फुलबारी मा स्याउ तल झर्छ । मेरो बगैंचा मा पाकेको अम्बा अन्तरिक्षतिर जान थालेको छ त्यसैले मलाइ पनि पागल हुने रहर जागेको छ। आजभोलि
मलाई पनि देवकोटा को जस्तो सच्चा पागल बन्न मन लागेको छ सद्देहरुको माझमा । मलाइ पनि बहुलठ्ठी र गधा हुन मन छ गधाले अरुलाइ दुख दिन जानेन । सबै सहिदिन्छ चुपचाप । भोकै तिर्खै हिड्यो कति दिन । गुनासो गरेन कतैपनि अरुको बारिमा पसेर पेट भरेन । पसिना बगाउँछ । गधाको पसिना पिएर मोटाएका छन मालिकहरु । गधाको पनि मन छ मुटु छ । कोर्राको चोटले उसलाई पनि दुख्छ गधा लालचि छैन । चौरमा आफ्नै मुखले चरेर बाँचेको छ त्यसैले मलाइ गधालाइ ढोगिदिन मन छ ।
ऊ भाग्यमानी हामि अभागि । ऊ पागल हामि सद्दे । अल्पायुमै शिखर चुमेर ढल्यो हामि बाँचेर पनि आधारशिविर देख्न सकेको छैनौ । इतिहास रचेर छोड्यो उसले। युगको प्रतिनिधि बनेर। आफ्नो सालिक आफै ठडायो । एक स्वतन्त्र सेनानी बनेर उभियो युगको सारथि बनेर । मसाल बोकेको एउटा सर्जक एउटा साधकि सिर्जनाको उपहार टक्कयाउँदै गयो। स्रष्टाको संसारमा जुनकुरिको पिलपिल पछ्यायो उज्यालोको खोजीमा ।
चेतनाको चारै ढोका खोल्यो र आखिर चन्दमालाइ छोइछाड्यो चन्दमाको उडान भरे पनि माटो बिर्सिन कहिल्यै पनि गुन् बिर्सेन कहिल्यै पनि मेरो उनिको । बिर्सिनेलाइ उहि बिर्सेर जाउँ चम्किलो तारा टिपेर ल्याउ।।।
कस्ले सुन्छ ? कस्ले सुन्छ
मेरो दिल दिन २४ घण्टा रुन्छ ।
भने चेतना दिएर ढल्यो । चितामा चडिसकेपछि पनि अनुभव पस्कँदै :
भन्ने अन्तिम सन्देश दिएर छाडे कालजयी एउटा पागल मन रुदा रुदै बिदा भयो मेरो मनको साथी मेरो आस्था को धरोहर मनमन्दिमा सजाइराखेको छु। मेरो प्रेरणा,मेरो प्रण,एक जिबन सहयात्री ।
हाल बसाइ काठमाडौं
जिबन सहयात्री ??